यतिबेला लगभग ५० लाख नेपाली देश बाहिरको श्रम बजारमा छन् । प्रतिदिन एक हजारदेखि एक हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा नेपाली युवा श्रमका लागि विदेश पलायन हुन्छन् भन्ने तथ्याङ्क थियो । तर, फागुन महिनामा त झनै बढी देखियो । विगतको कीर्तिमान पनि तोडियो । झण्डै दिनको पुगनपुग दुई हजार युवा पो विदेश हानिएको देखियो । देशभित्रै काम दिने स्थिर सरकार अब त बन्यो है बन्ने विश्वास किन बन्न सकेन ? घरखेत साहुकोमा बन्धकीमा राखेर किन युवाको मोह विदेशतिर जाँदैछ । नयाँ सरकार आएपछि पनि यसमा अझै किन तीव्रता आयो ? हाम्रो समृद्धि सपनासित जोडिएको विषय हो यो । जनशक्ति विदेश पलाउन हुँदै गर्दा यहाँ समृद्धि सपना खोज्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु जस्तै हो । यसमा तथ्यगत अध्ययन हुनु जरुरी छ ।
सरकारी खर्चमा पनि साधारणतर्पmको खर्च व्यापक हुँदैछ र अब झनै बढ्ने छ । सङ्घीय संरचनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा साधारण खर्चको आकार वृद्धिको माग गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको अनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन । पूर्वाधारको अभाव छ । कर्मचारीको कचमच गहिरो छ । मूल्यवृद्धि सामान्य रहे पनि तत्काल उत्पादन हुने तरकारीको मूल्यवृद्धि २५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले जनशक्ति बाहिरिएको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । तीन वर्षभित्र खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने सपना यसले साकार पार्न सक्दैन । समृद्धिलाई नारा र भाषणका विषय होइन, देशभित्रै आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने माध्यम बनाइयो भने मात्र समृद्धि सपना साकार हुने दिशामा अग्रसर हुन्छ । त्यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनु अपरिहार्य छ ।